Amafutha Seal, Spark Plug, Valve Cover Gasket - Huimao
Ngaphandle kwalokho, singakwazi ukunikezela ezinye izingxenye zenjini, izingxenye eziyisisekelo nezitho zomzimba, ezifana nohlelo lokushisa, izihlungi, amabombo, amabhuleki amasistimu, ukumiswa, njll.
Udinga uzakwethu onekhwalithi yokukhiqiza ethembekile nokutholakala.
Xhumana nabathengisi bethu ukuze ubone ukuthi singakusiza kanjani ukuthi usalve imali eningi.
Udinga umlingani onikela ngemikhiqizo ebanzi esezingeni eliphakeme kakhulu.
Isipiliyoni Sokuthekelisa Okucebile
Amakhasimende anwebeka emhlabeni wonke, ikakhulukazi emazweni angaphezu kwezi-60 nezifunda.
Izingxenye ezisele, Uphawu Ingxenye, Isesekeli Esizenzekelayo, Umfutholuketshezi Amafutha Seals, Izingxenye Zenjini, Uphawu Mechanical,